अमेरिका आवतजावत गर्नेलाई आफै जाने झैँ गरि भारी बोकाउन हामीलाई किन लाज लाग्दैन ? - Enepalese.com
अमेरिका आवतजावत गर्नेलाई आफै जाने झैँ गरि भारी बोकाउन हामीलाई किन लाज लाग्दैन ?
इनेप्लिज २०७५ साउन १० गते १:५३ मा प्रकाशित
विजय थापा ,यो आलेख पढे पछि अवश्य लाज लाग्ने छ भने कुरामा म ढुक्क छु । हामी नेपालीलाई लाजै छैन । कति सम्म गर्छौ भने पहिलो पटक अमेरिका जान लागेको मान्छे लाई गधा लाई भारी बोकाए झैँ सामान फलाना र ढिस्कानालाई सामान लगि दिनु ल भनिन्छ । बिचरा पुरुष वर्ग या महिला वर्ग निल्ल पर्छन । अमेरिका नेपाल जस्तो हुदैन । सामान ल्याएको छ भने पनि अन्य लामो दुरीमा भएको स्थानमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । द्रुत सेवामा खर्च हुन्छ । नेपालमा बस्ने धेरैलाई यो थाहा हुदैन ।
अमेरिका स्थाई रुपले बसोबास गर्न जान लागेको मानिस समेत बिबस हुन्छ । एक जना ले भन्थे ,साथीको पनि साथीलाई धेरै सामान नेपाल लागि दिनु ल भनेर आग्रह गरे पछि चोथाले साथीले म नेपाल जान लागेको कि तिमि स्वयम् भने पछि सामान लाने मानिस सुई कुच्चा ठोकेको कहानी सुनेको छु ।
सामान अलिकति दिने चलन हुदैन । धेरै सामान लागि दिन आग्रह हुन्छ । यसो गर्दा लानेहरुको बाक्य नै बस्दछ । लानु कसरि लानु ? किनभने आफ्नो नै प्रसस्त सामान लानु पर्ने अवस्थामा छिमेकि ,घरमा बहाल बस्ने ,छिमेकिको पनि मामा ,घर भाडामा बस्ने को पनि ससुरालीका पनि सालाका समेत सामान नभनी आई पुग्छ ? अनि कसो गर्ने ?
किनभने हामी आफैले दुख पाएको हौ । अमेरिका जाने भनेपछि हामी डम्फु बजाउछौ । ढ्वांग बजाउछौ । अनि १० गाउँ म अमेरिका जाने बुझिस भने पछि तपाईलाई गधा जति भारी न बोकाए कसलाई बोकाउछन त ? यस्तो लाग्छ कि तपाई मात्र अमेरिका जान लाग्नु भएको हो । अचेल हरेक घरको जस्तो सदस्यहरु अमेरिका पुगेका हुन्छन् । किन रुन्छन मंगले आफ्नै ढंग ले भनेको यही हो । शायद यसै कारण धेरै मानिसहरु हल्ला नगरी सुटुक्क नेपाल जाने र नेपाल बाट अमेरिका आउने पनि गर्छन । बिगतमा यस्ता दुख र हण्डर खाएकाहरु काबु भएर छड्के लाग्ने गर्दछन ।
त्यति मात्र कहाँ हो र ? आफ्ना छर छिमेकिका आफन्त अमेरिकामा बसोबास गर्छन भने उसलाई समेत डम्फु बजाएर सामान दिन लगाउछौ । बिचरा ,अमेरिका जाने मानिस अमेरिका पुगे पछि अरुको सामान लगेर आफु कन्त बिजोक भएका थुप्रै मानिसहरु भेटिन्छन । अरुको सामान लानु भनेको समाज सेवा हैन । जो सुकै होस् हुदैन भन्न सिक्नु पर्छ । म लान सक्दिन किनभने धेरै आफ्नो सामान छ भने पछि एक छिन्लाई ठुलो भएछ भन्छन तर त्यो रिस सदैव रहदैन ।
अमेरिका पुगे पछि शृष्टि गर्नु पर्ने हुनाले नेपाल बाट कम्तिमा ६ महिना सम्म पुग्ने गरि सामान लाने चलन हुन्छ । तर आफन्तले अमेरिकामा रहेका भएभरका लाई सामान लगि दिनु भने पछि नलगि पनि हुदैन ।
किनभने सासु ,ससुरा,काका ,बढाबा ,बढिआमा ,अन्तरेकाका ,ठुली आमा ,साला ,भिनाजु ,तल्ला घरे कान्छा ,माथिल्लो घरे काइलो ,मामा ,भिनाजु ,जेठान ,साथीभाई ,नातागोता आदिको नलगी सुखै छैन । किनभने यसरी नै आफुले पनि सामान अमेरिका लागि दिनु ल भनेर भनेको हुन्छ । जस्ता लाई त्यस्तै ढीडा नै निस्तै भनेको यहि हो ।
आफुले पनि यसरी नै एक पाथी मुरै ,चिउरा एक धार्नी ,जाडो महिनामा अमेरिकामा रहेका छोराछोरीलाई अंगिका (ज्याकेट )जिरा मसला एक धार्नी ,काठको सजावट सामान ,मूर्ति ,सानो प्रकारको गलैचा ,लुगाफाटा एक कन्तुर ,पुस्तक ,घिऊ आदि ईत्यादी पुर्याएको हुनाले आफुले चुइक्क परेर ल्याउनै पर्छ ।
अरुको सामान नेपाल लानु र अरुको सामान अमेरिका ल्याउनु ठुलो कुरा हैन । सामान ल्याईदिने चलन हुन्छ । तर कति दिनु पर्ने हो यो कुरा ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । कोही अरुको सामान बोक्न खुशी हुने पनि हुन्छन । उनीहरुलाई बधाई छ । तर अमेरिका आए पछि नरुनु होला । न पछुताउनु होला । एक महिना मै मैले नेपाल बाट केहि ल्याईन अरुको गर्दा भन्ने शब्द न निकाल्नु होला ।
पहिलो पटक अमेरिका बाट नेपाल जानेलाई पनि त्यस्तै समस्या आई पर्दछ । जान्छु मात्र भन्नु पर्छ अमेरिकामा आएर चिनेको साथीभाई ,छरछिमेकि ,,तल्ला घरे कान्छा ,माथिल्लो घरे काइलो ,मामा ,भिनाजु ,जेठान ,सासु ,ससुरा,काका ,बढाबा ,बढिआमा ,अन्तरेकाका ,ठुली आमा ,साला ,भिनाजुको सामान यति आउछ ।तपाईले वास्तवमा २५ प्रतिसत मात्र आफ्नो खुशीले लानु हुन्छ । अनि अमेरिका पुगे पछि थकथक हुन्छ । आफुलाई चाहिने सामान नल्याएर आफ्ना हाकिमका ,आफन्तका,अरुका अमेरिकामा पढ्दै गरेका सन्तानका लागि प्रसस्त सामान ल्याउदा यहाँ डलरमा खरिद गर्दा ढाड सेकिए पछि झास्यांग हुइञ्छ ।
नत्र अरुको समान बोकेर तपाई नायक झैँ नेपाल जानु पर्छ । एक आपसमा सहयोग र सानोतिनो सामानको लागि केही हुदैन तर दुई वटा मात्र सन्दुक (सुट केस ,बाकस )लैजान पाउने हुनाले अर्काको सामान नै एक बाकस भए पछि तपाईलाई नेपालका आफ्ना परिवार ले काच्चै खान्छन ।
किन अरुको सामान ल्याइस भनेर घरमा वातावरण पनि बिग्रिन्छ । तपाई लाई गाली गर्छन । अमेरिकामा अब न पाइने भनेको कुनै चिज छैन । अलिकति बेसी पैसा चाहिन्छ किनभने अमेरिकामा कमाई र आम्दानी पनि राम्रै हुनाले अब सामान नेपाल बाट लगिएन भने हाम्रो घर नै चल्दैन ? हाम्रो काम नै चल्दैन भन्ने बिल्कुलै गलत हुन्छ ।
आफु गएको समयमा ल्याउनु भनेको ठिक तर अरुलाई सदैव भारी बोकाउनु मानसिकता त्याग्नु पर्छ । बारम्बार मेरो सामान ल्याई दिनु भन्नु भनेको नै लाज पचाउनु झैँ हो । सदैव भरिया झैँ गरि नेपालबाट अमेरिका बाट फलाना चिज ल्याई दिनु । त्यति मात्र कहाँ हो र ? त्यही बाट पैसा हाल्नुअमेरिका आए पछि डलर दिऊला पनि भानिन्छ ।
यसको अर्थ यो हैन किन आफू सकिन्छ भने ल्याउनु पर्छ । ल्याउनु नै पर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । ल्याउनु भनेको कति ? हल्का र थोरै सामान लागि दिनु हुन्छ भनेर सोध्नु नै उत्तम । न सोधी एकै चोटी आधा सन्दुक भर्ने गरि सामान लगि दिनु भन्नु लाज पचेको हुन्छ । यसमा विचार गर्नु पर्छ । हामी बिदेशीहरु नभएकोले हामी अति सामान लान्छौ हाम्रा सन्तान दर सन्तानलाई सामान सके लाने कोसिस गर्छौ ।
नेपाल बाट अमेरिका र अमेरिका बाट नेपाल जाने मानिस कहिले पनि रित्तो गएको हुदैन । र जादैनन् पनि । पहिलो पटक अमेरिका आएको मानिसलाई झन् सामान लगी दिनु भन्नु हुदैन । किनभने आएको केही महिना सम्म संघर्ष गर्नु पर्ने हुनाले ख्याल गर्ने बानि बसालौ ।
उनीहरुले लागि दिन्छौ भने भने हामीले धन्य मान्नु पर्छ । अमेरिका र नेपाल पानी पधेरो झैँ गर्ने को प्रसंगमा यो आलेख मेल खादैन । अमेरिका आउने र अमेरिका जान लागेको व्यक्तिका सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
सामान लगी दिएन भन्दैमा रिसाउनु कदापी हुदैन । आफूले पनि न लाग्दा हुन्छ । केहि बिग्रिदैन । तर अरुलाई सामान बोकाउने परिपाटी लाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । कसैले राजीखुसी लगी दिन्छु भन्नु भनेको पृथक कुरा हुन्छ । उ कृतज्ञताको पात्र हुन्छ । हामी नाई भन्न सक्दैनौ । किनभने रिसाउने ,ठुस्किने ,गाला पुक्क फुलाउने भन्ने डर हामीलाई लाग्द्छ । अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने कुरै हुदैन । हुन्छ भने हुन्छ ,हुदैन भने हुदैन भन्न सिके युद्ध जिते झैँ हुन्छ ।